CILMI-BAADHAYAASHA SAMARA WAXAY CABBAAN SHAAHA MAR KASTA OO TUFAAX AH - MAQAALLO
Ruushka, saynisyahanno dhallinyaradu waxay ku faanaan guulo cusub - suxuun la tuuray oo laga sameeyey alaab la cuni karo. Qalabka ceeriin ee loogu talagalay soo saarista taarikada iyo muraayadaha maahan wax la yaqaano polymers iyo selulose, laakiin ... Suugo tufaaxa.
"Marka dadku ay marka hore maqlaan khubarada, waxay ka walaacsan yihiin macluumaadkan," ayuu yidhi horumarayaal ka socda magaalada Samara. "Laakiin waxaannu ku guulaysanay caddaynnaa in tayada iyo waxqabadka maacuuntaasi aysan ka yarayn qalabka caadiga ah ee caaga ah."
Horumarinta waxaa lagu qabtey machad Samara Polytechnic Institute, maantana jaamacadu waxay ku guulaysatay in ay samayso hindisaheeda.
Nadezhda Makarova, oo ah madaxa Waaxda Catering Technologies, ayaa mas'uul ka ahaa maaraynta mashruuca. Sida laga soo xigtay iyada, markii hore iyada iyo asxaabteeda waxay qorsheeyeen in ay horumariyaan xayeysiinta eco-ga, kuwaas oo kaliya maaha inay bixiyaan kaydinta muddada fog. Laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad cuntada si toos ah ugu diiriso qolofkan dabiiciga ah.
Sida tufaaxa la dubay ayaa faa'iido u leh miisaanka lumay, inta lagu jiro uurka iyo xaaladaha kale "Waxaan dooneynay cuntadeenna xayawaanka ah in aan la keydinin oo la kululeeyo, laakiin sidoo kale la cunay baakadkan," Nadezhda ayaa qirtay. oo hadda waxaan soo bandhignaa daawadayaasha iyaga oo sita miiska khaaska ah oo la isticmaalo! " Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen in haddii aad ka sameysan tahay lakab laga soo qaaday tufaaxa ama qudaarta cagaaran oo ku qallaji heerkulka qaarkood, waxaad heli kartaa aalado joogto ah iyo jawi saaxiibtinimo leh.
"Cunto samaynta, tufaaxa la shiiday ayaa u muuqda midka ugu habboon," ayuu yidhi cilmi-baadhayaasha. "Sababtoo ah wuxuu leeyahay balaasti ka badan alaabta kale ee khudaarta iyo miraha, iyo heerkulka suxuunta ka soo baxa tufaaxu si fiican u qabtaan (haddii aad ku shubto tufaax waxay ku qaboobi doontaa saacad) iyada oo aan la qabsan heerkulka sare. "
Waxaa intaa dheer, suxuuntaas sida fudud loo cuni karo. Ha ka baqin maadada kalooriga - badeecada waa wax sahlan oo nafaqo leh. Hubi kuwa horumariya.
Adeegga noocan oo kale ah ayaa la gooyaa dhowr maalmood. Biyaha, saxan waa la kala diri karaa 12 saacadood. Sida qiimaha, koobi hal koob oo tufaax ah ayaa u dhexeeysa 30 ilaa 40 rubuc.